A esiyingqayizivele online slot game nabathile izici eziyingqayizivele, Isenzo Bank is a platform enkulu ukuwina imali yangempela inthanethi. Abagembuli uthande zakudala timu ku slot imidlalo, kodwa akuzona zonke zakudala ezinezihloko Slots mobile inthanethi kukhona izikhala okuqhubekayo. Barcrest akwenzele umsebenzi omkhulu ngokwethula Action Bank ngoba ibhonasi yayo izici kungasiza abadlali win ezinkulu.
Kuyinto esondweni ezinhlanu kanye 20 betline inthanethi slot umdlalo obonisa abanye izimpawu ezithakazelisayo. Abagembuli bayokuthola ngempela esikhangayo ngenxa ihluzo futhi ikhwalithi yomsindo umculo. Ephelele manual ukugembula unikezwa ngezansi uhlangothi kwesikrini nokuthi futhi izici ukudlala ngokuzenzakalela inketho.
Izimpawu Game-Google Play:
Isenzo Bank edonsela abagembuli ikakhulu ngenxa izimpawu zayo. Le game has izimpawu ezintathu eziyinhloko, obomvu 7, X BAR. Lawa izimpawu ezintathu ukuthi uzobona phezu itolitji ukuphotha. Ungase futhi umhlaba imibuthano eziningi mhlophe, kodwa ngeke ukukuvuza yimuphi umklomelo. Amatshwayo ezimbili ezibalulekile lo mdlalo kukhona The Joker, uphawu zasendle ne-Golden Vault, uphawu chitha. Zama umhlaba lezi izimpawu ezimbili izikhathi eziningi ngangokunokwenzeka ngoba lezi angakunika ezinye onqobayo enkulu nezici ibhonasi.
Umdlalo ugijima ngokushelela futhi uphelele kokubili ezinkulu nezincane. Wena ukudlala ngendlela efana nezinye izikhala mobile inthanethi, kodwa izici ibhonasi ukudala umehluko oyinhloko Action Bank nezinye izikhala online mobile.
Indlela yomsebenzi ezinye ozitholayo enkulu kule game:
Akukhona ngakho ezinzima ukwazi ukuthi kokwehla ukulandelana 7s obomvu engakusiza abahola ezinye multipliers umxhwele. Ungakwazi uwine kufika ku 500x ka inani lakho embondelene futhi lokho bekuyoba yisiphambeko win umxhwele ngawe. Imibuthano ezimhlophe ungavula emibuthanweni yegolide umdlalo futhi uma kwenzeka, uthola ezinye multipliers ngaphezulu.
I khulula spin sici incike osakaza. Landing ezinhlanu noma ngaphezulu chitha izimpawu uzoguqula khulula spin sici kuwe. Uphawu zasendle usebenza ngendlela efanayo njengoba enza nakwezinye Slots mobile inthanethi. Uyothatha isikhundla sabo ezinye izimpawu ukudala ukulandelana kangcono ngokuwina.
Isenzo Bank izici Big Bank ibhonasi sici lolutawutsintsa round ukukha. Ungakhetha uphawu owodwa kusukela Idayimane, irubi noma isafire ukuze uthole ezinye multipliers ngaphezulu.
Isenzo Bank ephelele inthanethi slot game for eziningi amadlingozi futhi isenzo. Le game has 95.16% RTP futhi ungakwazi nakanjani ukunqoba jackpot by kokufika inhlanganisela yokuphumelela.